Fonosana kitapo tsy tenona | Mpanamboatra kitapo tsy manenona China, mpamatsy
1. Fitaovana: 40-100 gm Kitapo polypropylene tsy tenona
2. Karazan-tsokosoko isan-karazany sy lehibe, Kitapo fisoritana tanjona maro
3. Ny kitapo fisintomana mora dia tsara ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Wholesale Drawstring Bag dia mety amin'ny filàna fampiroboroboana, ireo kitapo drawstring mora vidy dia haharitra ela, tsara amin'ny fanaovana doka ny orinasanao sy ny hetsika arak'izay kasainao hatao.
4. Haben'ny sary ho an'ny fampiroboroboana anao, fanomezana fampisehoana varotra ;. Azonao atao ny manisy vy (mari-pana ambany) amin'ny fandefasana, fanerena hafanana, fanontana efijery, peta-kofehy, fanontana pirinty, famindrana loko feno, pirinty pad, fanontana tafahoatra.
Kitapo kitapo tsy tenona